Homeबिबिधहामी दुबैजना नेपालको माटोमा नाभी गा डिएका छोरीहरु हौं
ज्वाला सांग्रौला ।
जब तपाँई सामाजिक जीबनको गोरेटोमा हिँड्न थाल्नु हुन्छ, तब तपाँईसँगै यात्रा गर्न समाजमा अनेकौं रुप , गुण र आकारका चेहराहरु चाहेर नचाहेर तपाईँको अघिपछि जोडिएका हुन्छन्। ती चेहरा मध्ये तपाँई कसैको नजरमा प्रिय बन्नुहोला, कसैको नजरमा अप्रिय बन्नुहोला, त्यो तपाईँले रोजेको बाटोले तय गर्ने कुरा हो। यदि तपाईँ सत्यको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ ढुँगामुडा गर्ने कैयौं गिरोहसँग तपाँईको इन्काउन्टर हुनेछ, मुठभेडमा पर्नु हुनेछ तपाईँ किनकी आज प्राय मान्छेहरुले सत्य, इमान , र मानवीयता मान्यतालाई पोलेर खाईसकेका छन्! तसर्थ केहि अपराधी चरित्रका मान्छेहरु तपाईँलाई कसरी नामेट पारौं भनेर गल्ली , चोक, चियापसल र हाटबजारमा नाईटोमा क्यामरा बोकेर उँभिएका हुन्छन्! तर के थाहा तिनीहरुलाई कि तिनीहरुको कमजोर मनोबैज्ञानिक लेन्सको अगाडि तपाईँको आत्मबिश्विसको नशा कति बलियो र डाईनामिक हुन्छ भनेर..!
प्रसंग : आशिका तामाङको स्टाटस..! आशिका तामाङ्ले एउटा स्टाटस् लेखिन्! त्यो स्टाटसलाई म ख़राब भन्दिन ! ग़लत जस्ले गरे नि प्रस्न उठाउन पाउने अधिकार सबैलाई छ! तर उनको स्टाटसमा केहि अराजक शक्तिका अन्धभक्त झोलेहरुले रबि लामिछानेलाई अब सक्ने मौका यहि हो भनेर प्रतिक्रिया दिएका रहेछन् र केहि मेरा शुभचिन्तकहरुले मलाई ट्याग गर्नु भो..! मैले सरसर्ती कमेन्ट पढें र जम्मा एक लाइनको प्रतिक्रिया दिएँ, , “ भ्यानमा सीधा कुरा लेखिएको छैन, बाङ्गा कुरा नगरौ! “ यो प्रतिक्रिया ती आशिक़ाको लागि मैले दिएको हैन, मैले ती राजनैतिक र जातीय गन्धको धरापमा उँभिएका केहि अतिबादी सोचका गोठालाहरुलाई दिएकी थिएँ! तर यो कमेन्ट के गरेकी थिएँ, उताबाट आशिक़ाले मलाई जापान बसेर ठूला कुरा नगर, सक्छेस् भने फिल्डमा आईज मेरो जस्तै छोरो छोडेर भन्ने जबाफ फर्काईन्!
सबैको भलाईको निम्ति सामाजिक काममा होमिएको मान्छेले यसरी सस्तो र अर्थहिन कमेन्ट गरेको देखेर मलाई बडो ताज्जुब लाग्यो! किनकी आज देश र जनताको समृदिको लागि सामाजिक क्षेत्रको फराकिलो बाटो रोजेकाहरुले यस्तो साँघुरो चिन्तन सहितको आलोकाँचो प्रतिक्रिया दिँदा म अचम्म परें! पछि केहि साथीहरुले भन्नु भो कि यो पेज अरु कोहिले चलाउँछ ! मलाई थाहा छैन यो पेज कस्ले चलाउँछ ,सोध्नु पनि छैन कस्ले र किन चलाउँछ भनेर किनकी जबसम्म यो पेजबाट उच्छृङ्खल र बिबादित बिषयहरु आएनन् भने एउटा बाँदरले नै चलाएपनि मलाई स्वीकार्य छ!मलाई आशिकाको जबाफप्रति हमदर्दी या ग़ुस्सा केहि छैन र मैले उनीसँग तर्क बितर्क गरेर बेकारमा उनको र मेरो समयलाई फोहोरको डिब्बामा तब्दील गराउनु पनि छैन! तर यहि कमेन्टको प्रतिक्रियालाई लिएर सन्जालमा भाँडभैलो देखेर मलाई नेपाली समाजको चेतनाको स्तर देखेर दिक्क लागेको छ। यहि कमेन्टलाई लिएर आशिक़ा Vs ज्वाला भन्दै केहि फेकुरामहरु आफ्नो असली अनुहार कट्टुको खल्तीमा घुसारेर टाङमुनिबाट भुकिरहेका छन्! कसैले मिल्नु पर्यो भन्छन्, कसैले जातिय आँखाले हेरेर पक्षधरता देखाएका छन् भने बुझेर मुल्याङकन गर्नेहरु चाहिँ एकदमै कम छन्!
म एउटा कुरा के भन्छु भने म यहाँ आशिकासँग बोन भिटा खाएर र जिम गरेर ६ प्याक देखाउँदै लड्न भिड्न आएको हैन! मलाई कसैसँग तुलना गरियोस् ! ज्वाला ज्वाला हो आशिका आशिका हो! जुन क्षमता ज्वालासँग छ त्यो क्षमता आशिकासँग छैन र जुन क्षमता आशिकासँग छ त्यो क्षमता ज्वालासँग छैन..! समाजले त हामी दुबैको क्षमता कहाँ कहाँ फिट हु्न्छ, त्यहाँ त्यहाँ प्रयोग गर्ने पो हो त! अनावस्यक बिबाद मच्चाएर राजनैतिक र जातीय दंगा फैलाउने हो? आज मैले धेरै जसो प्रधान , तामाङ र नेताको आलोचना गरि भनेर मसँग बटारिएका केहि लम्फुहरुले फेक आईडीबाट मेरो फ़ोटो दुरुपयोग गर्दै मनपरी लेखेका छन्।
यस्को हिसाबकिताब समयले जरुर माग्छ , र माग्नैपर्छ! यति भन्दै गर्दा मेरो जस्तै चुचो नाक र भासिएका आँखा भएका आर्यनहरुले आशिकाको थर तामाङ् भयो भन्दैमा जातिय भट्टामा राखेर उनलाई नजलाऊनुहोला,उनको अपमान नगर्नु होला, उनको फोटो रातो घेराभित्र राखेर रिप नलेख्नु होला, उनको अनुहार र शारिरीक बनावटको बारे अनावाश्यक टिका टिप्पणी नगर्नु होला ! किनकी यस्तो गर्नु समाजको loss हो। आधा सँजाल मेरो फ़ोटो भाईरल गरेर पतन भयो, बाँकी आधा खबरदार, आशिकाको जात , धर्म र चरित्रमाथी उत्रिइस् भने तिमीहरु मेरो काका , बाऊ , ससुरो , जो कोहि भएनि म छोड्ने छैन। आशिका “तामाङ “हुनु उनको दोष हैन, म “बाहुन “हुनु मेरो दोष हैन, दोष त यो बिखण्डनकारी समाजको हो जस्ले आँखा र नाककको बनावट हेरेर हामीलाई तिमीहरु अलग अलग हौ भनेर जतायो! म यस्तो अर्थहिन चेतनाको ठेली बोकेर मान्छेलाई मान्छेबाटै अलग बनाउने समाजको एक्लो बिरोधी हुँ!
आज हामी देशमा एउटा असल मानिस खोजिरहेका छौ! एउटा आईकन खोजीरहेका छौं। यहि आईकन खोज्ने क्रममा हामी ब्यक्ति पूजा गरिरहेका छौं। आईकन खोज्नु र ब्यक्ति पुजा गर्नु अलग कुरा हो! आजभोलि यहि भागदौडमा नेपाली समाज र यस्को चरित्र हेर्न र सुन्न नसकिने गरि फोहोर भैसकेको छ! सड़क सफा गरेर के हुन्छ जब ब्यक्तिको सोच नै गन्धा छ भने..! तसर्थ ग़लत नजरियाबाट बिकसित हर कोहिले आफ्नो दिमाग साफ गर्नु जरुरी छ! ग़लत कुरामा ताली पड्काउने र सहि कुरामा औँला ठड्याउने गैरमतियारहरुको भयानक पाखण्डबादले आज नेपाली समाजको संरचना नै ध्वस्त भएको छ! मिस्इन्फरमेसन र डिस्इन्फरमेशनको कुम्लो भिर्दै माफियागिरीको टुप्पो उक्लेर चुँडिएको चंगा जस्तो उडन्ते लोकप्रियताले कति दिन आफ्नो सामाजिक नाक बचाउँछ र? धरातल छोडेर बादलको हँगामा पिङ खेल्नेहरुसँग म चौबिस घण्टा बहस गर्न तयार छु, तर बहस बिचार र तर्क सँग बग्नु पर्छ!
तसर्थ मेरो कुरा काटेर र मेरो फ़ोटो भाईरल गरेर फेकुहरुले मेरो केहि उखाड्न सक्दैनस् । आशिका तामाङसँग न मेरो बिबाद छ न मेरो कुनै रिसईबी! तर मेरा केहि प्रश्नहरु जरुर छन् उनीसँग ,जो म उनीसँगै बसेर सोध्न चाहन्छु ! म उनीसँगै बात मार्न चाहन्छु ! उनीसँग कुनै न कुनै दिन त मेरो भेट हुने नै छ! म र उनी जापान र जर्मन भएर के भो, उनी तामाङ र म बाहुन भएर के भो, हामी दुबै नेपाली हौ..! भोलि मलाई अवस्यक परेमा उनको रगत मिल्ला, उनलाई परेमा मेरो रगत मिल्ला..! किनकी भोलिको अनुहार आजको जिनले निर्धारण गर्दैन! कतिलाई तीतो लाग्ला मेरो बिचार , कतिलाई मीठो लाग्ला, त्यो ब्यक्तिको सोच र आचरणको स्वाद हो! सत्य आधा सुन्दर हुन्छ, आधा कुरुप हुन्छ! किनकी यो सृस्टिले पनि धरातलमा सुन्दर र कुरुप दुबैथरी मान्छे दुत बनाएर पठाएको छ..!
हामी दुबैजना नेपालको माटोमा नाभी गाडिएका छोरीहरु हौं, आशिकाको योगदान र ज्वालाको योगदान आफ्नै आफ्नै ठाउँमा छ! हामीले ग़लत गरेको खण्डमा र अरुलाई लडाउँन जिउ छाडेर लागिपरेको खण्डमा हामी आफै पतन हुने छौं।उदाहरणको लागि
फ़िलहाल हामी दुबैलाई छोडेर आफ्नो￼￼ आफ्नो काम गरे हुन्छ!
-ज्वालाको फेसबुकबाट साभार
tadalafil pill – best place to buy tadalafil online reviews tadalafil tablets
finasteride and alcohol – http://propechl.com/ finasteride cost
buy zithromax 250mg online – azithromycin 100mg pills zithromax withoutascript
furadantin ultram lioresal
panadol vantin moduretic